Windows7R-Click Menu in Vista - keywords HERE
Home » registry » Windows7R-Click Menu in Vista
Windows7R-Click Menu in Vista
ကျနော် ကျန်းမာရေးနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့် စာမရေးဖြစ်တာကြာသွားပါတယ်။ အဲဒါတောင်မှ ခဏခဏ လာကြည့်ပေးကြတဲ့ အမျိုးတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု Vista HP ကို သုံးနေတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာ ပါလာတဲ့ Right-click menu လေးက ရိုးရိုး(မပြုပြင်ထားသော) Vista တွေမှာ မပါဘူးဗျ။ windows7သုံးလာပြီးတော့ Vista ပြန်သုံးတာ ဆိုတော့ သူ့မှာပါတာလေးတွေ Vista မှာ လုပ်ကြည့်လို့ရမလားလို့ စမ်းကြည့်လိုက်တာပါ။ ကဲပါ ... စမ်းကြည့်ရအောင် ...
အခု ပြထားတဲ့ ပုံကတော့ Desktop မှာ Right-Click လုပ်လိုက်ရင် ပေါ်လာမယ့်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ အရမ်းများသွားမှာပေါ့။ ကျနော်က Personalize မှာ ပါတာတွေ အားလုံးကို Right-click menu မှာ ပေါ်လာအောင် ထုတ်ပြထားလိုက်တာပါ။ မိမိသုံးချင်တာလေးပဲ ယူသုံးပေါ့။ (ဥပမာ- Desktop Background ပြောင်းတာပဲ ထည့်ချင်ရင် Change Wallpaper ကိုပဲ ယူထားပေါ့ ) ။ အသုံးတည့်မှာပါနော် .. ဆက်ကြည့်ပေးပါဦး။
အရင်ဆုံး Appearance ထည့်တာကို လုပ်ပြပါ့မယ်။
Winkey+R ကို နှိပ်ပြီး Run ကို ခေါ်ပါတယ်။ regedit လို့ run မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး Registry Editor ကို ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အောက်ပါ Directory အတိုင်း သွားပေးပါ။
Shell မှာ Right-click ထောက်ပြီး New - Key ကို နှိပ်ပါတယ်။
Appearance လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Appearance မှာ Right-click ထောက်ပြီး New - Key ကို နှိပ်ပါတယ်။
command လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
command ကို နှိပ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာ Default ဆိုတဲ့ item လေး တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို Double-click နှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ Value Modify မှာ Value ကို
control desk.cpl,,2 ဆိုတာလေး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း Desktop right-click menu မှာ Appearance ဆိုတာ ပေါ်လာပါပြီ ။
ကျန်တာတွေကလည်း တူတူပါပဲ ။ Shell အောက်မှာခွဲတဲ့ sub folder name ရယ် Command အောက် Value တွေပဲ ပြောင်းတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်သွားပြီး value လေးတွေ သူ့နေရာနဲ့ သူလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ (ဥပမာ- Change Wallpaper ကို ထည့်ဖို့အတွက် Appearance နာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာ Change Wallpaper ကို ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ Value ထည့်တဲ့နေရာမှာ Change Wallpaper မှာပေးထားတဲ့ တန်ဖိုး ထည့်ပေးမယ်လေ။ အောက်မှာ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ တန်ဖိုးတွေပဲ တန်းစီရေးပေးလိုက်ပါ့မယ်။ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်)
Change Screen Saver ...
Folder name ---
Change Theme ...
Change Wallpaper ...
Desktop Icons Settings ...
DPI Scaling ...
C:\_\_program files\_\_windows sidebar\_\_sidebar.exe /showgadgets
အခုပေးထားတာကတော့ C:\_ မှာ Windows တင်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။ သဘောပေါက်မှာပါ။
Window Colorization ...
အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးကို လုပ်လို့အဆင်မပြေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်မပေးပဲ လုပ်ပြီးသားပဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကျနော် လုပ်ထားပြီးသားအတိုင်း အောက်မှာ .reg ဖိုင်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Run ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မကြိုက်တာ ပြန်ဖြုတ်ချင်တာဆိုရင်တော့ (တစ်ခုခြင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အားလုံးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)ခုနက လုပ်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာပဲ ပြန်ပြီး Delete ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
အဆင်ပြေစွာ အသုံးတည့်ကြပါစေဗျာ ...
Registry, Vista Trick, Windows Vista